Xil wareejin ka dhacday Dugsiga sare Shiekh Cismaan Qardho ee Degmada Qardho. – Ministry of Education in Puntland
Dugsiga sare ee Shiekh Cismaan-Qardho ayaa xilalka lala kala wareegay.
Maamulaha Cusub ee Dugsiga sare Shiekh Cismaan Cabdulqaadir Muuse Axmed ayaa xilka kala wareegay Maamulihii hore ee Dugsiga sare ee Shiekh Cismaan Qardho Cabdixafiid Bilaal.
Xil wareejintaa Dugsiga sare Shiekh Cismaan Qardho ayaa waxaa kasoo qayb galay Masuuliyiinta Gobolka Karkaar oo uu ka mid yahay Siciid Maxamed Faahiye, Guddoomiyaha Waxbarashada Gobolka Karkaar, Bashiir Galari, Guddoomiyaha Waxbarashada Degmada Qardho Cabdullaahi Cabdi Cali Faandhe, Kormeeraha kowaad ee Waxbarashada Gobolka Karkaar Mahad Gacayte, iyo Guddiga Waaridiinta iskuulka Dugsiga sare ee Sheikh Cismaan.
Ugu horrayn, Maamulihii hore C/xafiid Bilaal oo xafladda hadal kooban ka jeediyay munaasibadda ayaa ka warramay ahmiyadda ay ku lahayd muddadii uu maamulaha ka ahaa Dugsiga ay aheyd mid loogu adeego bulshada gaar ahaan Ardayda reer Karkaar si loosoo saaro arday wanaagsan.
Maamulaha cusub ee loo tiriyay xilka oo isna halkaa ka hadlay, waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay isku-xidhnaanta iyo wada-shaqaynta hawl-wadeennada kala duwan ee Gobolka Waxbarashadiisa . Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in maamulka, Macallimiinta iyo Wasaaraddu si dhow u wada shaqeeyaan, wuxuuna tilmaamay kor u qaadida Waxbarashada iyo baahiyaha Wasaaradda oo uu sheegay in loo baahan yahay in kor loo qaado.
Maamulaha cusubi ee Dugsiga sare Shiekh Cismaan, C/qaadir Muuse Axmed waxa uu ballan qaaday inuu si wanaagsan u gudan doono hawsha xilka loo dhiibay lana shaqayn doono Maamulka Waxbarashada iyo Macallimiinta iyo Guddiga waaridiinta iskuulka.
Guddoomiyaha Gobolka Karkaar horayna u ahaa Guddoomiyihii hore ee Waxbarashada Degmada Qardho Siciid Maxamed Faahiye ayaa hadal kooban ka jeediyay halkaas, waxa uu ka warramay ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay Gobolka iyo hormarka bulshada, wuxuuna tilmaamay in Guddiga Waxbarashada iyo Dowladda ay la shaqeynayaan dhammaan Maamulka Waxbarashada Karkaar.
Guddoomiyaha Waxbarashada Gobolka Karkaar Bashiir Galari oo gebogebadii munaasibaddaa xil-wareejinta ka hadlay, waxa uu sheegay in aanay Maamulayaasha iskuullada waxba qaban karin haddii aanay la shaqaynin dhammaan mas’uuliyiinta Gobolka iyo Guddiga Waaridiinta ee iskuulada . Gudoomiyaha waxa uu sheegay in waxbarashadu tahay laf dhabarka Gobolka oo dhan, loona baahan yahay in horumarinteeda laga wada shaqeeyo.
Xafladda Xil-wareejinta Dugsiga sare ee Shiekh Cismaan Qardho ayaa ku idlaatay jawi farxadeed iyo balanqaadyo wada shaqeyn.